Monday 3rd September 2018 15:00:39 in Wararka by Super Admin
Ninka ka shaqeeya dhanka internet-ka ee lagu magacaabo Bilal Harry Khan ayaa ka hadlaya caqabadihii uu magaciisa kala kulmay
intii uu ku soo korayay dalka Ingiriiska wuxuuna dadka ka codsaday in ay ku dadaalaan qabashada magacyada aysan horay ula qabsannin.
Anigoo sagaal sano jir ah ayey hooyadey ii kaxeysay suuqa. Waxaan tagnay Dukaan buugaagta lagu iibiyo oo ku yaalla suuqa Shepherd ee galbeedka London.
Dukaankaas waxaa lahaa nin heysta diinta Rastafari ee ay ku dhaqmaan qaar ka mid ah dadka u dhashay Jamaica. Wuu ii yimid wuxuuna igu yidhi, "Magacaa?"
Si deg deg ah ayaa ugu jawaabay, "aniga lama hadlo dadka aanan aqoonin."
Laakiin isla markiiba waxaa noo timid hooyadey. Waxaan dareemay kalsooni, waxaana idhi, "Magaceygu waa Bilal."
Ninkii ayaa yidhi, "Waa magac aad u awood badan. Ma taqaannaa Bilaalkii caanka ahaa?"
Waxaa idhi, "Maya."
Wuu iiga sheekeeyay. Wuxuu ii sheegay inuu jiray Bilal ibnu Rabaaxa oo ka soo jeeday Itoobiya, kaas oo isagoo addoon ah ku dhashay magaalada Maka sannadkii 580 AD.
Waxaan niyadda iska idhi, "Waaw waa sheeko cajiib ah."
Ninkii dukaanlaha ahaa wuxuu ii sii sheegay inuu Bilal lahaan jiray cod qurux badan uuna nabiga CSW u soo xushay inuu mu'adin u noqdo.
"ma heesi kartaa?" ayuu igu yidhi.
Taariikhda Janaral Maxamed Cali Samatar
"Een, maya," ayaan ku idhi anigoo yaxyaxsan, oo rajeynayana inuusan i dhihin hees qaad.
Laakiin niyadda waan ka faraxsanaa. Waxaan ku niyad samaa inaan ugu dambeyn kasban karo magaceyga. Aana soo shaac bixin doono. Waxaan niyadda iska idhi, haddiiba uu magaceyga wato sheekada sidaas cajiibka u ah ma jirto sabab aan ula xishoodo.
Image captionBilal Harry Khan oo la sawiran waalidkiis
Waxaan sannadkii 1990-kii ku dhashay waqooyiga-galbeed ee London waxaana ku soo koray xaafadda Neasden.
Hooyadey waxay u dhalatay Jamaica waalidiinteedana waxay asal ahaan ka soo kala jeedaan bariga Aasiya iyo Africa, aabahayna waa Kenyan asal ahaan ka soo jeeda Koonfurta Aasiya. In kastoo uu ku dhashay bariga Africa, qoyskiisu waxay ka soo jeedaan qeyb ka mid ah Kashmir oo hadda loo yaqaanno Pakistan.
Waalidiinteyda labaduba waxay qaxooti ahaan ku imaadeen Ingiriiska iyagoo dhallin yaro ah waxayna isku barteen iskuulka.
"Waxaan xasuustaa anigoo ka cadhooday mar uu macallinkeyga iigu wacay Bee-laarl
Hooyadey iyo aabahay waxay ku dadaaleen in ay wax iga baraan dhaqannadeyda labada dhinacba, laakiin marka la eego cuntada aan cuni jiray iyo nooca muusiga aan dhageysan jiray waxaan u batay dhanka Jamaica oo hooyadey ay ka soo jeeddo.
Neasden waa xaafad ay ku badanyihiin dadka jinsiyaddooda isku qasantahay, anigana lama soo korin dad caddaan ah. Laakiin inta badan macallimiinteyda iskuulka ayaa ahaa caddaan waxayna ku rafaadi jireen ku dhawaaqista magaceyga. Qaarkood wey iga halleyn jireen magaca.
Image captionBilal Harry Khan iyo hooyadiis
Waxaan xasuustaa innaan ka cadhoon jiray markii mid ka mid ah macallimiinta uu iigu yeedho Bee-laarl. Waxaan u maleyn jiray inaan aniga la ii waceynin markaas. Waxaan aad ula yaabi jiray sida ay ugu adkaan karto inuu ku dhawaaqo magac sidaas u fudud oo ah Bilal.
Markii aan soo gaaray sideed sano jir, waxaan xasuustaa inaan ciyaalka qaraabadeyda ah u sheegay sida aan ula dhibaateysanahay magaceyga. Waxaan u sheegay inaan doonayay magac sahlan si markaas aan uga gudbo caqabadda ah inaan mar walba magaceyga sharraxaad ka bixiyo. Waxaan rabay inaan yeesho magac ingiriis ah. Waxaan jeclaa inaan la baxo David.
Ma jirin sabab gaar ah oo aan ku xulanayay magaca David, marki laga soo tago inuu yahay magac fudud oo dadka ay ku dhawaaqi karaan. Laakiin muddo yar kadibba waxaan billaabay inaan ka laba labeeyo.
Waan fikiray waxaana is idhi waa inaad hesho magac ingiriis ah oo ka billaabanaya xarafka "B". waxaan ku fikiray inaan baxsado "Ben". Laakiin, maya. Magacaas ma ii cuntameynin.
Waxaa jirtay arrin kale oo ku saabsan magaca Bilal. Waa magac muslim ah oo ka yimid qoyska aabehey ee reer Kashmir, balse aniga waxaa soo barbaaray anigoo masiixi ah. Sidaas awgeed su'aalo fara badan ayaa arrintaas la iga weydiin jiray marki aan Kaniisadda tago.
Image captionBilal Khan iyo asxaabtiisa
"Xaguu ka soo jeedaa magacaaga?"
"Sideed ku heshay magac noocaas ah?"
"Maxay waalidiintaada kuugu bixiyeen magacaas?"
"Kaasi soo ma aha magac muslim ah?"
Su'aalahaas ilaa hadda waa la I weydiiyaa.
Waxaan khaatiyaan ka taagnaa inaan mar kasta sharraxaad dheer ka bixiyo magaceyga iyo sida uu ku yimid.
Waxaan ahaa cunug yar oo dugsiga hoose dhigta, uma aanan dul qaadan karin arrintaas.
Laakiin markii aan la kulmay ninkii reer Jamaica ee lahaa dukaanka buugaagta lagu iibiyo, waan joojiyay rabitaankeygii magaca Ingiriiska.
Hadda dadka kale ayaa jeclaan lahaa inaan lahaado magac sida kooda oo kale ah.
"Uguma dul qaadan karo dadku iney iigu yeeraan Bill ama Billy
Markii aan dhammeystay jaamacadda waxaan billaabay inaan qabto siminaarro ku saabsan arrimaha bulshada iyo wax barashada iskuullada.
Xitaa meelahaan inti aan joogay dadku waxay la rafaadsanaayeen magaceyga ku dhawaaqitaankiisa.
Dhawaan waxaan qaban qaabineynay siminaar loo qabanayay Iskuul ay wax ka bartaan arday caddaan ah.
Macallinka iskuulka markii aan xiriireynay waxaan email ugu sheegay inuu magaceyga yahay Bilal Harry Khan. Marar badan ayuu emailka iigu soo qoray magaceyga Bilal.
Laakiin maalintii uu siminaarka dhacayay ayuu markii uu ardayda igu soo dhaweynayay si lama filaan ah ugu yiri "Ninkaan waa Harry."
Aad baan ula yaabay arrintaas waxaan is idhi "Muxuu ahaa ninkaan!"
Markii aan ardaydii soo hor istaagay ayaan ku idhi "Haye waan idin salaamay, magaceygu waa Bilal."
Dadkii ku jiray qolka oo dhan waxay fiiro ugu dhaqaaqeen macallinkii waxayna u muuqdeen kuwo jah wareeray.
Waa la iska aamusay, ka dibna waxaan billaabay inaan hadalkeyga sii wato.
Markii ay noo soo dhammaatay ayuu macallinkii ii yimid wuxuuna iga raalli galiyay arrinta dhacday, laakiin wuxuu ku adkeystay inuu sidaas u sameeyay maadaama uu filayay inuu magaceyga ku adkaan doono ardayda.
Balse waxaan niyadda ka idhi: "Maya, ma uusan ku adkeyn, waayo ardayda qaarkood ayaa ii imaadeen waxayna magaceyga ugu dhawaaqayeen si sax ah."
Xaaladuhu way isasoo baddalayeen muddooyinkii dmabe. Haddii aad eegto liiska magacyada ugu badan ee carruurta ku dhalatay Ingiriiska 2017-kii waxaad ku arkeysaa in magacyada Muhammad iyo Mateo ay ku jiraan 50-ka magac ee ugu sarreeya dhinaca wiilasha, sidoo kale Aaliyah iyo Luna waxay noqdeen 50-ka magac ee ugu sarreeya dhanka gabdhaha.
Sidaas awgeed waxaa la rajeynayaa in ay sii badan doonaan dadka loo bixiyo magacyadaas. Laakiin hadda waxay u muqataa mid adag, wali dadka qaar ayaa isku dayaya iney magaceyga ku baddalaan magacyo kale oo carrabkooda u sahlan.
Magacyada naaneysta ah way iga xanaajiyaan, uma dulqaadan karo in la iigu yeero Bill ama Billy. (waxaan markaas soo xasuusanayaa Billy Mitchell oo ka tirsan barnaamijka Eastenders.)
Waxay doonto ha kugu qaadato laakiin waa inaad fahanto sida loogu dhawaaqo magaceyga aan hadda kuu sheegay. Haddii aad ka dhigato magac adiga dhaqankaaga u dhow, ma ahan mid aniga dhaqankeyga u dhow.
Carruurta ku sugan Ingiriiska waa iney ku koraan iyagoo magacooda jecel oo ku faanaya. Waxaad u sameyn kartaan qeyb wax barasho oo ku saabsan sida magacyada loogu dhawaaqo.
Sidaas uma adka. Haddii aad ku dhawaaqi kartid "Tchaikovsky", waad ku dhawaaqi kartaa magacyadeenna.
[DEG DEG:-"Kheyroow Barlamaanka isbaarada ka qaad fadlan"..Gudoomiye Jawaari Oo Iminka Afka Furtay [VIDEO LIVE]
Sii Akhri Mar 30th 2018